Football Khabar » च्याम्पियन्स लिग नकआउट चरण खेल्ने बार्सिलोनाको टोली घोषणा : को–को परे ?
च्याम्पियन्स लिग नकआउट चरण खेल्ने बार्सिलोनाको टोली घोषणा : को–को परे ?
स्पेनिस क्लब बार्सिलोनाले जारी सिजन युरोपियन च्याम्पियन्स लिगअन्तर्गत अन्तिम १६ का खेल खेल्ने आफ्नो प्रारम्भिक टोली घोषणा गरेको छ । अघिल्लो दिन बार्सिलोनाले २४ सदस्यीय टोली घोषणा गरेको हो । घोषित टोलीमा कप्तान लिओनल मेस्सीसहित हाल चोटसँग जुधिरहेका लुइस स्वारेज र उसामान डेम्बेले पनि अटाएका छन् ।
टोलीमा रिकभरीक्रममा रहेका स्वारेज र डेम्बेलेका साथ गोलपिकर नेटो र अर्टुरो भिडाल पनि परेका छन् । त्यस्तै, यसपटक टोलीमा टिम ‘बी’बाट ६ जना खेलाडीलाई डाकिएको छ । नयाँ प्रशिक्षक क्विके सेटिनले टिम ‘बी’ का युवा खेलाडीलाई च्याम्पियन्स लिगमा डेब्यु गराउने उद्देश्यले टोलीमा राखेका हुन् ।
प्रतियोगिताका अन्तिम १६ का खेल फेब्रुरअी १८ तारिखबाट सुरु हुँदैछन् । बार्सिलोनाले अन्तिम १६ मा इटालियन क्लब नापोली प्रतिस्पर्धी पाएको छ । उसले पहिलो खेल फेब्रुअरी २६ का दिन अवे मैदानमा खेल्नेछ ।
डिफेन्डर – नेल्सन सेमेडो, जेरार्ड पिके, क्लेमेट लेङलेट, सामुएल उम्टिटी, जुनियर फिर्पो, रोनाल्डा अराउजो, सर्जियो एकेइमी
मिडफिल्डर – इभान राकिटिक, सर्जियो बुस्केट्स, अर्थुर मेलो, सर्जी रोवेर्टो, फ्रेन्की डे जोङ, अर्टुरो भिडाल, फेर्रान सार्सान्डेज, हिरोकी अबे
फरवार्ड – लिओनल मेस्सी, लुइस स्वारेज, एन्टोनी ग्रीजम्यान, उसामान डेम्बेले, रेई मानाज, किके सेभेइरो
प्रकाशित मिति २२ माघ २०७६, बुधबार १०:५१